Kunamata Points Kwemoto weRumutsiriro Kwehupenyu hwechiKristu | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points Yemoto weRumutsiriro Kwehupenyu hweChikristu
Nhasi tichange tichitarisana neminamato mapoinzi emoto werumutsiriro rwehupenyu hweChikristu. Kune maKristu akawanda kwazvo ane hupenyu hwemweya hwakavhiringidzwa neiyo Muvengi. MuKristu anongova mumwewo munhuwo zvake asina hupenyu hwemhando yepamusoro. Muvengi anonzwisisa kuti kana hupenyu hwemweya hwemuKristu husiri chinhu chinofanira kunyorwa kumba nezvacho, Mukristu akadaro ari panjodzi. Kana tichitaura nezve hupenyu hwechiKristu, hazvisi zvezita chete. Panofanira kuve nechimwe chinhu chakakodzera kuratidza seuchapupu hwekuti isu tiri maKristu. Vatendi vazhinji havachina nguva yekunyarara, havataudzane naMwari zvakare.
Izvo zvinoda maKristu mazhinji izvozvi rumutsiriro. Kana tichitaura nezve rumutsiriro, zvinoreva kudzosa kuhupenyu. Izvi zvinoreva kuti, chimwe chinhu chinodzoreredzwa pakubwinya kwayo kwekutanga. Iko kukosha kweruponeso rwedu hakusi kungodaidzwa kunzi maKristu, ndezvedu kuti tirarame hupenyu hwehunhu hunogutsa vanhu kuti tiri vatendi vechokwadi vechokwadi. Kekutanga nguva apo izwi rekuti muKristu rakagadzirwa raive muAndiyoki. Vanhu vakaona hupenyu hwevaApostora uye vakagutsikana kuti iwo mufananidzo chaiwo waKristu. SevaKristu, hupenyu hwedu hwepamweya hunofanirwa kuve hwepamusoro-soro. Izvi zvinongogoneka kuburikidza nemunamato usingagumi, kudzidza uye kuteerera kuraira kwaMwari.
Zvinosuwisa kuti vatendi vazhinji vabva pakudaidzwa kweruponeso. Hupfumi hwehupfumi hwapofomadza maKristu mazhinji uye vafuratira rudo rwavo rwekutanga anova Kristu Jesu. Vazhinji vaenda kunotsvaga hupfumi nesimba zvekuti vanokanganwa musiki wavo. Bhuku raMuparidzi 12: 1 Rangarirawo Musiki wako pamazuva oujaya hwako, mazuva akaipa asati asvika, namakore asati aswedera; panguva yauchazoti handifariri izvozvo. Ino ndiyo nguva yakanakisa yekumutsidzira moto paartari yehupenyu hwedu hwechiKristu. Tinogona kuita zvishoma kana dambudziko rikauya. Haisi chiito panguva yekurwa chinoita isu murwi, ndiwo makore ekugadzirira.
Ndinokumbira netsitsi dzaMwari Samasimba, hupenyu hwese hweChikristu hwakagashira moto izvozvi muzita raJesu. Ini ndinopesana nemhando dzose dze kushungurudzwa izvo zvakuendesa kure naMwari, ndinotsiura zvinokanganisa zvakadai nekuda kwako muzita raJesu. Ini ndinouya kuzopesana nezvose zvinoitwa nemuvengi kuti ndikudonhedze kubva panzira yekutenda uye yekururama, muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinokutendai kune imwe nguva, rimwe zuva. Ndinokutendai nemaropafadzo, nyasha uye tsitsi. Ndinokutendai nekupa. Ndinokutendai nenyasha dzakandidaidza kuti ndibve murima mupinde muchiedza chinoshamisa chaKristu, Ishe, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
Ishe, rugwaro runoti mubhuku ra 1 John 1: 9 If tinoreurura zvivi zvedu, akatendeka uye akarurama kuti aregerere zvivi zvedu uye atisuke kubva mukusarurama kwese. Ishe, ndinoreurura zvivi zvangu pamberi penyu, ndinonamata kuti netsitsi dzenyu mundiregerere muzita raJesu.
Ishe Mwari, munzira ipi neipi iyo kutadza kwangu kwakapa mukana kumuvengi kuti andirove, ndinokumbira kuti mundiregerere nhasi muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa, kunyangwe zvivi zvangu zvakatsvuka serutsvuku, zvichaitwa chena kupfuura chando, kunyangwe zviri zvakatsvuka kuti piriviri, zvichaitwa chena kupfuura mvere. Ndinokumbira kuti netsitsi dzenyu mushambidze zvivi zvangu chose muzita raJesu.
Pisarema raPisarema 80:19 Tidzorerei, O Ishe Mwari Wamasimba Ose! Chiso chenyu ngachipenye, tigoponeswa. Ndinokumbira kuti mundidzorere. Musandirasire kure nechiso chenyu uye musabvisa mweya wenyu mutsvene kwandiri. Dzorera kwandiri mufaro wekuponesa kwako, uye unditsigire nomweya wako wakasununguka. Baba, ndinonamatira kudzoreredzwa kwehupenyu hwangu hwechiKristu nemuzita raJesu.
Ishe Jesu, rugwaro rwunoti uyo unofunga kuti akamira ngaachenjere kunze kwekunge awe. Ini ndinoramba kudonha, ndinokumbira kuti mundipewo nyasha yekumira nemi kusvika kumagumo, Ishe, sunungurai nyasha idzi pandiri muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinonamatira moto mutsva kuti utange kupisa paatari yehupenyu hwangu hwechiKristu. Ini ndinopesana nemhando dzose dzekudziya mumweya wangu wemunhu, ndinokumbira kuti mweya mutsvene utore hupenyu hwangu uye undipe simba rekuenderera nekutenda muzita raJesu.
Ishe, ndinosangana nemhando dzose dzekukanganisa munzira yangu. Dambudziko rega, nhamo kana muyedzo uyo muvengi angangoda kutumira nzira yangu kuti andibvise pamberi paIshe, ndinouya pauri nemoto weMweya Mutsvene muzita raJesu.
Ishe, ndinotsvaga moto unopfuta werumutsiriro pamusoro pehupenyu hwangu hwemweya. Ndinokumbira kuti iwe udzore mweya wakanaka mukati mangu. Ndinopikisa masimba ese erima akatumirwa kuunza hupenyu hwangu pamweya, ndinobvisa zvirongwa zvavo nesimba muzita raJesu.
Rugwaro runoti mubhuku raPisarema 19: 7 The Murayiro waJehovha wakakwana, unomutsiridza mweya. Chipupuriro chaJehovha ndechechokwadi, chinopa vasina mano njere. Ishe, ndinonamatira kumutsidzirwa kwemweya wangu, ndinokumbira kuti mundidzidzise mutemo wenyu uye muuite kuti zvionekwe pane zviga zvemoyo wangu muzita raJesu.
Shoko rako rinotaura mubhuku raPisarema 80:18 Ipapo hatife takakusiya zvakare. Tiraramise kuti tikwanise kudana zita renyu zvakare. Ishe Jesu, dzorerai hupenyu hwangu hwechiKristu nhasi nesimba renyu guru.
Ishe, ndinonamata kuti mundipe nyasha yekurarama hupenyu hwangu ndichitevedzera Jesu Kristu. Hupenyu hwangu ngahuve hunoratidza Kristu muzita raJesu.
Previous nyayaAnonamata Anonamata Anonongedza Kuporesa Hosha Yeitsvo
inoteveraYakasimba Chiziviso Munamato Kuparadza Chakaipa Sungano
Minamato Yousiku Kupesana Nemidzimu yeNyoka Chikamu 1